Location: musha » Kutumira » ushingi » Inouraya Nightmare Zororo muCancun ye3 Canadian Vashanyi
Kune vashanyi vatatu vekuCanada vanogara paHotera Xcaret Resort mudunhu reCancun, Mexico, zororo ravo rose rinosanganisira mafaro rakashanduka kuita rinotyisa.
Isu tinowedzera kunakidzwa kune-inosanganisirwa kune yedu Yese-Inonakidza Inosanganisirwa ™, pfungwa yekuvandudza yekushanya kwakasimba inopa zvinopfuura mazana maviri zviitiko. Iyi ndiyo tsanangudzo pa Hotera Xcaret webhusaiti munzvimbo yevashanyi yePlaya del Carmen pedyo neCancun, Mexico.
Maererano nemishumo yenhau yemunharaunda, mumwe mushanyi nhasi akaurayiwa, uye vaviri vari muchipatara cheko nekukuvara kwakakomba kwakaitika panguva yekupfura. Vakaurayiwa vaive vashanyi vekuCanada vaigara panzvimbo iyi
Secretariat of Security yeMexico State yeQuintana Roo inosimbisa kuti vashanyi vatatu vakakuvadzwa mushure mekupfura. Zvichakadaro, zvinoita sekunge mumwe wevakabatwa akafa.
Ichi chiitiko chitsva chemhirizhonga mukati meHotera Xcaret complex.
Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) January 21, 2022
Musi waNovember 4, eTurboNews yakashuma nezve vanhu vaviri vakapfurwa ndokuurayiwa pane imwe Hyatt-inotungamirwa zvese-inosanganisirwa nzvimbo yekutandarira munzvimbo imwechete.